Proverbe 562 Anoano be izany, ataovy izay ataonao ! [Veyrières 1913]
Proverbe 707 Ataovy am-bato tsy hahavery : katsaho ka tadiavo . [Houlder 1895 #773]
Proverbe 708 Ataovy anatra imaso hifanatrehana , fa raha takona tonga fosa . [Rajemisa 1985]
Proverbe 709 Ataovy anoano ao na hisy na tsy hisy. [Veyrières 1913 #3656]
Proverbe 710 Ataovy betsaka ny sakaizanao , fa ataovy vitsy ny itokiana . [Veyrières 1913 #5067]
Proverbe 711 Ataovy fanjakan' ny malahelo , ka mangin- tsy afoy . [Veyrières 1913 #3169]
Proverbe 712 Ataovy fihavanam-bava sy tanana: koa raha marary ny tanana, dia mitsoka ny vava , ary marary ny vava dia misafo ny tanana. [Houlder 1895]
Ataovy fihavanam-bava sy tanana : raha marary ny tanana, dia mitsoka ny vava ; ary raha marary ny vava , dia misafo ny tanana. [Cousins 1871 #304, Veyrières 1913]
Fihavanam-bava sy tanana : raha marary ny tanana, mitsoka ny vava ; ary raha marary ny vava , misafo ny tanana. [Nicol 1935]
Proverbe 714 Ataovy fitia landihazo : ka ny madilana tentenana , ary ny maito tohizana . [Houlder 1895 #195]
Ataovy fitia landihazo : ny madilana tentenana , ny maito tohizana . [Veyrières 1913 #5065, Cousins 1871 #306]
Fitia landihazo : ny madilana tentenana , ny maito tohizana . [Nicol 1935 #7]
Proverbe 715 Ataovy fitian-dranon' erika: madini-pihavy fa mahatondra-drano . [Houlder 1895 #200]
Aza manao fitian-dranon' erika : fa aoka hasesiky ny fitia tanteraka , ka tsy mahalala ranonorana ho lany . [Rinara 1974 #499]
Aza manao fitian-dranon’ erika : madini-pihavy , fa mahatondra-drano ; fa aoka hasesiky ny fitia tanteraka , ka tsy mahalala ranonorana ho lany. [Cousins 1871 #444]
Proverbe 720 Atao vikin’ alina : aleo miohatra toy izay ho latsaka . [Cousins 1871, Nicol 1935]
Proverbe 721 Ataovy lava ny tendanao , ravano , hahenina anay mianakavy . [Veyrières 1913 #4465, Cousins 1871 #308]
Proverbe 722 Ataovy mifikitra amim-bahy lena , fa tsy amim-bahy maina . [Veyrières 1913 #828]
Tsy mifikitra amim-bahy maina , fa mifikitra amim-bahy lena . [Veyrières 1913 #828, Rajemisa 1985]
Proverbe 723 Ataovy mitombo hoatry ny tohatr' omby fahavaratra , fa aza atao mihena hoatry ny trafon' omby ririnina . [Veyrières 1913 #2171]
Proverbe 726 Ataovy tery omby ririnina ka atao izay tsy hahabotry ny zanany ary tsy hankahia ny reniny. [Rajemisa 1985]
Proverbe 728 Ataovy toy ny lamban’ akoho ny fanambadiana : faty no hisarahana . [Cousins 1871 #312]
Proverbe 729 Ataovy toy ny landy: an-trano vao manatevina . [Houlder 1895 #760]
Ataovy toy ny landy ny tokantrano : an-trano vao manatevina . [Veyrières 1913 #75]
Ataovy toy ny landy ny tokantrano : ao an-trano vao manatevina . [Rinara 1974 #337, Cousins 1871 #313]
Proverbe 730 Ataovy toy ny landy , ny bokaboka mameno ny kely andilana . [Rajemisa 1985]
Proverbe 731 Ataovy toy ny sira ny fitondra havana : mahery, tsy mahafola-nify ; malemy, misy hitelemana ; fa ny havana no lelafin-katelina . [Cousins 1871 #314]
Ataovy toy ny sira ny fitondran- -kavana : mahery tsy mahafola-nify , malemy misy hitelemana , fa ny havana no lelafin-katelina . [Rinara 1974 #338]
Proverbe 732 Ataovy toy ny tsimpon-tainomby ny filan-karena : na kely azo, na be azo, ataovy an-karona . [Veyrières 1913 #2172, Cousins 1871 #315]
Proverbe 733 Ataovy toy ny tsipoy mifamelona . [Houlder 1895 #1778, Cousins 1871 #316]
Proverbe 734 Ataovy tsy very ny soa , fa ny vato aza raha nanambina nohosora-menaka . [Rinara 1974 #342]
Proverbe 735 Ataovy vatsin-tsorohitra : an-dalana vao mitady. [Veyrières 1913 #4466, Cousins 1871 #317]
Ataovy vatsin-tsorohitra , ka an-dalana vao mitady . [Rinara 1974]
Proverbe 799 Aza atao andry ombin' ilay adala , ka ny aloha voatora-tandroka , ary ny aoriana voafola-drambo ; fa ataovy andry ombin' ilay mora , ka ny aloha voakahankahana , ny aoriana voasafosafo . [Veyrières 1913]
Proverbe 834 Aza atao manara-bato aman-kazo . [Rinara 1974 #408]
Proverbe 873 Aza dia miolika hoatry ny tsinain' ondry ; fa aoka mba ho tsotra hoatry ny tsinaim- -balala . [Veyrières 1913 #4974]
Aza dia miolika loatra ohatry ny tsinain' ondry , fa ataovy tsotra toy ny tsinaim- -balala . [Rinara 1974 #442]
Aza dia miolika ohatra ny tsinain’ ondry ; fa aoka mba ho tsotra ohatra ny tsinaim- -balala . [Cousins 1871]
Proverbe 1425 Aza misomidika ambony toa menaka : fa ataovy latsaka anatiny toa tsoka. [Houlder 1895 #531]
Proverbe 1452 Aza mitoe-mamokaiky , fa ataovy izay tratry ny aina . [Cousins 1871 #662]
Proverbe 2351 Henan' ny mpitsoka miozika : ataovy tsara zara , fa vidim-pofon' aina . [Veyrières 1913 #4491, Cousins 1871 #1048]
Proverbe 2988 Lalao amin-jaza : ka ataovy izay tsy hampitomany azy. [Veyrières 1913 #1515, Houlder 1895]
Proverbe 4004 Mba ataovy toy ny anana lahy, ka raha maniry, tsongoy . [Houlder 1895]
Proverbe 4005 Mba ataovy toy ny voankazo an' ala ny anatra omen' ny olona ny tena , ka ny mangidy aloa ary ny mamy atelina . [Veyrières 1913 #6512]
Proverbe 4923 Ny anatra ataovy toy ny hazo : Hazony raha manendrika anao, avelao hihazohazo raha tsy azoazonao. [Rinara 1974]
Proverbe 5160 Ny havana ataovy toy ny andry ombin' ilay mora : ny aloha voasafosafo , ary ny aoriana voatehatehaka . [Houlder 1895]
Proverbe 5203 Ny iray tsy tia mafana, ary ny iray tsy tia mangatsiaka; ka ataovy marimaritra hiraisana . [Houlder 1895 #263]
Proverbe 6112 Raha mpamosavy azo nanitsaka, ataovy toy ny anana, ka raha maniry, tsongoy . [Houlder 1895]
Proverbe 8257 Voanantay , voanantay : ka ataovy be mba hilana . [Veyrières 1913 #3165, Houlder 1895]